Mety hisy zavatra hitranga tampoka? Ny famahanam-bolongana fohy (Twitter, friendfeed...)! | Hevitra MPANOHARIANA
Mety hisy zavatra hitranga tampoka? Ny famahanam-bolongana fohy (Twitter, friendfeed...)!
2009-07-15 @ 22:15 in Ankapobeny
Efa andro maromaro aho no te-hamoaka ity lahasoratra iray ity ka enga anie mba ho vita soa aman-tsara amin'izay. Mivoatra haingana dia haingana ny tontolon-tserasera nefa isika Malagasy amin'ny ankapobeny, ary tafiditra amin'izany ihany koa ny tenako izay manoratra, dia malaina mandrakariva ny handray zava-baovao. Izaho ohatra, noho ny fahateren'ny fotoana nefa te-hamoaka vaovao mandrakariva, dia voatery mihitsy vao niditra tamin'izany Twitter izany, saingy nahita fa indraindray toa tsy ampy hanoratana feno io tahala iray io no niditra ihany koa tamin'ny Friendfeed. Somary hitantara kely aho hanao jery todika nahatonga ahy higadona ihany koa any amin'ho ny famahanam-bolongana fohy (microblogging).
Efa mahalala angamba ny maro amin'ny mpamaky eto fa mpandika ho amin'ny teny malagasy ny lahatsoratra ao amin'ny Global Voices aho. Mazava loatra fa tsy maintsy ho mpamaky io vohikala iraisam-pirenena iray io aho. Efa mpandika teny tao aho no nalaza ny hitsanganan'izany facebook izany. Tsy dia taitra loatra tamin'izy io aho tany am-boalohany. Noraisiko ho natokana ho an'ireo nandalina tany amin'ny sekoly ambony any amin'ny firenena tandrefana io tambajotran'ny mpiserasera io. Volana vitsivitsy lasa izay tamin'ity taona ity aho vao niditra tao, satria nisinisy ihany ny rohy no nankany amin'ny Facebook nefa izaho izay mpandika aza tsy tafiditra any akory. Tahaka ny nampihomehy valaka ahy ihany io toe-javatra iray io. Dia tafiditra tao amin'ny facebook ny namana jentilisa. Tamin'ny ankapobeny dia ireo namana an-tserasera ihany no namana voalohany tao amin'ny facebook. Mba nitady mpiara-mianatra taloha tadidy anarana ihany aho tao fa tsy nahita mihitsy hatramin'izao na dia iray aza. Angamba noho ny tena avy any amin'ny sekolin'ny zanabahoaka no tsy dia nahitako loatra ireo notadiavina.
Tafiditra tao amin'ny facebook ary aho. Ny tena nanahirana ny saiko sy nampisalasala ahy ela dia ilay fitadiavany ny tenimiafina miditra amin'ny mailaka yahoo fampiasako. Efa tapa-kevitra ny hiditra manko aho indray mandeha no niato tampoka rehetra tratran'io fitadiavana tenimiafin'imailaka io. Ny resaka sovoka (piraty) no nahiako indrindra. Tapa-kevitra ihany rehefa ela ny ela fa aleo hitranga any izay hitranga fa hiditra aho sady tsy mbola nahare vaovao loatra hoe nisy tratran'ny sovoka tamin'ny fidirana io sehatra io. Kanjo tokoa moa dia tsy naninona loatra ny tena aloha hatramin'izao. Ny tanjon'ireo nanao ny tolotra facebook na ireo mpanome ny tolotra ho an'ny tambajotran'ny mpiserasera (réseau social) amin'ny ankapobeny dia ny lisitr'ireo mpifanerasera aminao amin'ny mailaka ihany no iaingany ka raha tsy misy dia mampandefa fanasana avy aminao ho an'ny namanao izy. Avy eo indray ianao mitady ireo izay tadidinao anarana dia mba nisy vitsivitsy aloha ny namako ao. Tao aloha no nahitako fa efa niha-niseho sary amin'izay ny Malagasy mpiserasera raha mbola maro ny natahotra tamin'ny nampalaza indrindra ny serasera.org. Hatramin'izao aloha ny fandraisako ny facebook dia miompana be dia be amin'ny fifandraisana mahaolona na dia misy aza ireo vondrona isankarazany azonao idirana.
Nitendritendry ny vatamarobokotra (clavier) indray ny tena hanoratra vaovao fohy tao amin'io sehatra io. Nahatsapa tena avy hatrany anefa fa tsy tokony ho ao no amoahana ireo vaovao fohy ireo fa sehatra hafa no sahaza izany, nefa tsy amin'ny bolongana mahazatra ihany koa. Ny mahazatra ny mpiserasera malagasy raha vao mahita ka mampita ny vaovao hitany dia any amin'ny dinika (forum) hatrany. Tsy dia mahomby loatra anefa ny famoaham-baovao any amin'ny dinika satria : Voalohany vetivety dia mety hanjavona ny vaovao avoakanao no sady ny famoahan-kevitra sy ny faniratsiràna no tena manjaka any. Faharoa be ny mpamoaka vaovao any nefa tsy fantatra ny olona mamoaka ny vaovao, noho izany, sarotra ny mino izay ambarany. Sarotra ny fampitam-baovao raha vao tsy misy ny fifampitokisana ka izany no ilàna ny mahalala ilay na ireo mpamoaka vaovao. Mazava loatra fa ny vaovao no misongadina kokoa fa tsy ilay famoahan-kevitra loatra. Niditra tamin'ny Twitter indray i jentilisa amoahany izay hitany sy reny.
Rehefa niditra tao amin'ny Twitter dia nampitadiavany namana tamin'ny alalan'ny imailaka indray. Tsy nampatahotra ahy intsony ny amin'iny. Tao aho dia nahatsikaritra fa afa-mandray roa ity Twitter ity. Sady mametraka ny fifandraisana amin'ny mahaolona izy no famahanam-bolongana saingy famahanam-bolongana fohy ihany. Mitovitovy halavana amin'ny SMS amin'ny finday ihany ny halavan-tsoratra azonao alefa indray mandeha satria 140 ihany ny isan'ny tarehintsoratra zakany ary tafiditra amin'izany ny banga (espace). Ny tombony dia vetivety dia miely ny vaovao na resaka lazainao satria azon'ireo miray tambajotra manaraka ny soratanao (followers) avy hatrany ny hafatra alefanao. Tsy sahirana mivezivezy etsy sy eroa ihany koa ianao mikaro-baovao farany fa misoratra anarana amin'ny Twitter indray mandeha dia tena "aterineto" aminao avokoa izay lazain'ireo arahinao.
Mbola misy ihany koa ny kilema hafa ananan'ny Twitter. Ankoatra ny fisian'ny fandefasana hafatra manokana tsy hitan'ny ankoatra ny andefasana dia mety tsy ho azon'ny hafa mbola tsy misoratra anarana tamin'ny Twitter izay voasoratra nefa firesahana amin'ny hafa ao anaty tambajotra ny votoatindresaka. Tsy mifampitohy avy hatrany toy ny any amin'ny dinika (forum) ihany koa ny resaka fa toy ny mandefa SMS manokana hitan'ny besinimaro ianao. Voaarin'ny Friendfeed io lesoka io ka dia izay ihany koa no nahatonga ahy hiditra amin'ny Friendfeed.
Ao amin'ny Friendfeed dia afaka ampifanohizana amin'izay niandohan-dresaka ny famoahan-kevitra, fa mila misoratra anarana miditra amin'ny Friendfeed ianao raha te-hamoaka ihany koa ny hevitrao. Famahanam-bolongana fohy ihany koa ny Friendfeed saingy afa-manoratra lavalava kokoa ianao. Tsy azo atao lava loatra anefa fa sao tapaka, tohizana eo ambany eo amin'ny famoahan-kevitra indray izay soratanao avy eo. Afa-manohy ny resaka manampy anao ihany koa ny hafa. Izany hoe afa-manoratra lava ihany ianao amin'ny alalan'ny famoahan-kevitra tsikelikely araka ny fotoana anananao fa tsy voatery ho vita ilay lahatsoratra lavabe (toy ny amin'izao bolongako izao) vao avoakanao ilay lahatsoratra. Ny tombony hafa amin'ny Friendfeed ihany koa dia ny fisian'ny hoe like sy ny share. Tsy voatery mamerina manoratra ianao fa manindry ny iray amin'ireo fotsiny dia toy ny efa mizara bolongana fohy sahady ianao. Mampiely haingana ny vaovao ny fanaovana izany fihetsika mizara na milaza ny fitiavanao ny lahatsoratra na rohy izany.
Manana ny kilemany ihany koa anefa ny Friendfeed : Tsy dia natao loatra ho ana mpampiasa solosaina ifandimbiasana izy. Raha miditra amina solosaina iray aho ohatra ka miditra Friendfeed eo ka hivoaka Friendfeed avy eo dia tsy mety tafala (logout). Raha misy olon-kafa indray hiditra Friendfeed eo dia ho gaga fa ny Home-ko izay teo alohany no hahatafiditra azy avy hatrany ka ho toy ny afa-manoratra amin'ny anarako izy, eny fa na dia efa novonoina aza io solosaina io ka velomina indray dia izay no mitranga. Efa nisy nanoro ihany anefa aho ny karazan'ny hamafana izay nidirako tamin'ny Friendfeed ka mba tsy hidiran'izay taoriako amin'ny Home-ko dia izao manaraka izao no ataoko:
Any Ampiasana moa dia Internet Explorer no miasa any. Tany no nisy olana ananako fa tsy ny aty an-trano loatra. Ao amin'ny Internet Explorer niseraseranao tamin'ny Friendfeed ary dia mifantina ny Outils ery ambony ery aho. Misy fàfana kely mivoaka eo rehefa manindry ny Outils aho dia tsindriako ao indray ny Option Internet. Raha efa izay dia tsindriako indray ny Supprimer les fichiers ao amin'ny Fàfana Général. Misy fafana mivoaka indray avy eo eo manontany raha hofafana tokoa ny Temporary Internet Files fa manao OK ianao. Avy eo dia misintaka amin'ny Friendfeed tsy mety mikatona mody mijery zavatra hafa ianao. Azonao atao avy eo ny manamarina raha tena efa niala avy tao anatin'ny Friendfeed misy ny Home-nao ianao amin'ny fiverenana miditra Friendfeed indray (tsy mampiasa ny bokotra précédent). Ny ato an-trano indray moa dia Firefox no ampiasaiko, nefa mbola tsy nanandrana ny hamafa (izany hoe hivoaka Friendfeed) aho satria tsy misy loatra ny mifandimby solosaina amiko. Fa raha mitovitovy ny famafana hivoahana amin'ny Friendfeed dia miditra Tools ianao, dia misafidy ny Clear Private Data dia misafidy izay tianao hofafana ianao fa heveriko ho ny Cache no tokony hofafana aloha (na ny Authenticated Sessions fa tena tsy haiko aloha!). Tsy miantoka ny mety ho fahasimbana aho fa andramo ihany aloha.
Izay no ela fa ny fanamarihako farany, raha ny fanaoko teo aloha dia ny manasa anao hiditra amin'ny Twitter-ko no ataoko nefa ny tokony ho izy dia ny ao amin'ny Twitter no fanasana ny olona hamaky ny bolongana ary fanaon'ny mpamaham-bolongana fohy izany. Ny anjara toeran'ny bolongana sisa hatreto aloha dia ny fizarana ny vaovao lava na ny hevitra mila fotoana lavalava na eritreritra tsy tana. Misy ary moa ny namana iray milaza fa tsy misy ilàna ny mamaham-bolongana rehefa tsy ho hitan'ny olona iny, saingy ny eo ny tambajotra iraisan'ny mpiserasera hampiely ny fivoahany haingana dia haingana. Manory hevitra anao ary aho hiditra Twitter (siokamboronkely) na/sy Friendfeed (fahan'ny namana) dia hanaraka ireo mahaliana anao amin'izay namanao sy arahin'ny mpamaham-bolongana arahinao na ireo manaraka ny mpamaham-bolongana arahinao rahateo fa tsy tokony hanenina velively ianao fa ho afak'andro aza. Azo atao ihany koa anie ny hoe manangana tambajotra miteny malagasy ihany koa isika ao raha tianao e! sady ny mpanoratra rahateo efa manoratra amin'ny teny malagasy rahateo. Tsy terena ianao na dia izany aza!
jentilisa 16 jolay 2009 amin'ny 00: 16
dia zahay "mpanaraka" dia manara-baovao tokoa moa izany fa mankasitraka foana e !!!
Nampidirin'i ikalamako @ 22:52, 2009-07-15 [Valio]
Aleo ihany bolongana fa ity mba lavalava ny resaka e. Raha hijery vaovao tselatra dia efa misy ireny fil d'infos ataon'ny sobika, gtt sy ny namany ireny!
Misaotra @ ireo ezaka @ teny malagasy e. Tohizo ny bolonganao fa hafa ihany ilay afaka manoratra lavabe.
Nampidirin'i Gina @ 08:16, 2009-08-03 [Valio]